KEDU KA ESI GHỌTA NA EBINYERE IBE AHỤ NA VC, IHE Ị GA-EME - NETWORK NA INTANETI - 2019
Isi Network na Intaneti
Otu esi aghọta na akaụntụ hacked na VK: ndụmọdụ na ntuziaka bara uru
VK netwọk mmekọrịta nwere ike ghara ichebe onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ya site na hacking data nkeonwe. Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme ihe ọjọọ na-achịkwa akụkọ na-enweghị ikike. A na-ezigara ha spam, ozi ndị ọzọ na-eziga, wdg. Iji jụọ ajụjụ a: "Olee otú ị ga-esi ghọta na e bibiri ibe gị na VC?" Ị nwere ike ịchọta azịza ya site n'ịmụ banyere iwu dị mfe nke nchekwa na Ịntanetị.
Kedu ka esi ghọta na ibe na VC na-agafe
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ebinyere peeji ahụ
Otutu njirimara njirimara nwere ike igosi nke oma na akuko gi abanye na ndi nke ndi ozo. Tụlee ụfọdụ n'ime ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị a:
ọnọdụ nke "Ịntanetị" n'oge ndị ahụ mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị. Ị nwere ike ịchọpụta ya site n'enyemaka nke ndị enyi gị. N'ihe ọ bụla enyo, rịọ ha ka ha nyochaa ọrụ na ibe gị nke ọma;
Otu n'ime ihe ịrịba ama nke hacking bụ ụkpụrụ online mgbe ị na-abanyeghị na akaụntụ gị.
N'ihi gị, ndị ọrụ ndị ọzọ malitere ịnata spam ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ị na-ezigaghị;
Jide n'aka na ejidela akaụntụ gị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ amalite ịnweta mailings n'aka gị.
ozi na mberede na-agụ na-enweghị ihe ọmụma gị;
Ozi na-enweghị òkè gị na mberede na-agụ - otu ọzọ "mgbịrịgba"
Ị nweghị ike ịbanye na akaụntụ gị site na iji nọmba ekwentị na paswọọdụ gị.
Ọ bụ oge ịkpọ ụda mkpu ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na iji nzere gị
Ụzọ a na-ahụ maka ịlele ịbanye ga-eme ka ị soro ọrụ ọ bụla na ibe gị.
Gaa na ntọala: na nri aka nri n'elu pịa aha gị ma họrọ ihe kwekọrọ na ya.
Gaa na ntọala profaịlụ
Na ndepụta nke isiokwu na nri, chọta ihe "Nche".
Gaa na ngalaba "Nche", ebe a ga-egosipụta akụkọ ihe mere eme
Lezienụ anya na windo nke na-ekwu "njedebe ikpeazụ". Ị ga-ahụ ozi gbasara mba ahụ, ihe nchọgharị na adreesị IP nke ị banyere na ibe. Ọrụ "na-egosi akụkọ ihe mere eme" ga-enye data na nleta niile na akaụntụ gị site na nke ị nwere ike ịmata hacking.
N'ihu nke ọ dịkarịa ala otu n'ime ihe ịrịba ama ndị dị n'elu agaghị eleghara nsogbu ahụ anya. Chebe data onwe gị ma weghachite njikwa zuru oke na ibe a ga - enyere aka:
Lelee Antivirus. Site na nke a, kwụpụ ngwaọrụ site na Ịntanetị na netwọk mpaghara ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na nje virus zuru paswọọdụ ahụ, mgbe ahụ, ihe nchịkọta ọhụrụ nke ihe odide nwere ike ọzọ n'aka ndị na-agba ọsọ.
Na ịpị bọtịnụ "Kwụsị niile" ma na-agbanwe paswọọdụ (adreesị IP niile eji na ibe ahụ, ma e wezụga nke ugbu a, na-egbochi).
Pịa "Mechie sessions niile," IP niile ma e wezụga nke gị ga-egbochi.
Ị nwekwara ike weghachite ohere na ibe ahụ site na ịpị na taabụ "Chefuo paswọọdụ gị" na isi menu "VKontakte".
Ọrụ ahụ ga-ajụ gị ka ị gosi ekwentị ma ọ bụ adreesị ozi-e ị na-eji nweta saịtị ahụ.
Dejupụta n'ọhịa: ịkwesịrị ịbanye na ekwentị ma ọ bụ ozi-e, eji maka ikike
Tinye captcha iji gosipụta na ị bụghị robot na usoro ahụ ga - eme ka ị bịa na paswọọdụ ọhụrụ.
Tinye akà rà igbe "Adịghị m robot"
Ọ bụrụ na enweghi ike iweghachite ihu na ibe "Echefuola paswọọdụ gị?" Njikọ, wee kpọtụrụ nkwado site na ibe enyi maka enyemaka.
Mgbe ịbanye na peeji nke ọma, chọpụta na ọ dịghị data dị mkpa ehichapụ ya. Ngwa ngwa ị dee ederede maka nkwado ntanetị, ọ ga-abụ na ha ga-abụghachi ha.
N'ihe banyere izipu spam maka nnọchite gị, dọọ ndị enyi gị aka na ọ bụghị gị. Ndị mmegide nwere ike ịchọ n'aka ndị ị hụrụ n'anya iji nyefe ego, foto, vidio, na ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe siri ike ịmepụta ndị omempụ ma chebe ha, ma ọ bụ ihe a na-anakwere iji bulie ọkwa nke mmeri ha megide ha.
Mepụta paswọọdụ siri ike. Chịkọta okwu, okwu, ọnụọgụgụ, ọnụọgụgụ, ma ọ bụ karịa. Gosi ihe niile ị na-eche n'echiche, ị ga-anwakwa na ị gafefe data gị;
Wụnye antiviruses na scanners na ngwaọrụ gị. Ndị kachasị ewu ewu taa bụ: Avira, Kaspersky, Dr.Web, Comodo;
jiri nyocha abuo abuo. Nkwenye siri ike nke nchebe pụọ na hacking ga-enye ọrụ "Kwenye paswọọdụ". Oge ọ bụla ị banyere na nọmba ekwentị gị, a ga-ezigara gị paswọọdụ otu oge, nke ị ga-abanye iji nyochaa nchedo gị;
Iji nye nchedo ka mma, nye aka nyocha abuo.
Kpachara anya na peeji gị ma na nke a, ị ga-enwe ike ịgbatị ihe ọzọ hacker ọgụ.
Ịchọpụta ngwa ngwa nke mbanye anataghị ikike ga-enyere aka ichekwa data nkeonwe ma chebe onwe ya pụọ ​​na usoro niile nke ndị na-eme ihe ọjọọ. Kọwaara ndị enyi gị na ndị enyi gị ihe ndekọ a iji nwee ike ịdị na-eche nche nchebe.
https://termotools.com ig.termotools.com © Network na Intaneti 2019